Bekukubi kwamanye amaqembu | News24
Bekukubi kwamanye amaqembu
UKUBUYA nokuqala kwemidlalo yeligi yePSL kulethe ukugedla kwamazinyo, ukujabha kanye nokuthokoza kwamanye amaqembu.
Indaba esakhulunywa nengakholeki kulezinsuku, ukuthelwa ngehlazo kwe-Orlando Pirates emva kokudliwa ngo 6-0 yiMamelodi Sundowns emdlalweni obuse Pitoli.
Umbuzo olokhu ubuzwa ngabathandi bebhola baseMzansi ikakhulukazi abamaBhakaBhaka ukuthi kaze kwenzekani ekilabhini yabo ?
Futhi yini eyenza uSihlalo wePirates u-Irvin Khoza athathe isikhathi eside kangaka ukuqasha umqeqeshi.
Ngendlela izinto ezenzeke ngayo ngesikhathi leliqembu lithelwa ngehlazo yiMamelodi Sundown ngo 6-0, kubukeka sengathi uKhoza uzophoqeleka ukuthi asheshise ngalodaba lokuqasha umqeqeshi omusha.
Abasondelene nosihlalo weBhakaBhaka nabasebenza ngaphakathi ekilabhini bathi iPirates kungenzeka iqashe ukhosha ngokuphuthumayo lingakapheli lelisonto esikulo.
“Kuningi esekonakele futhi abalandeli badinwe bagane unwabo. Kanti noSihlalo uyazibonela ukuthi zimbi izinto nokuzosiza ukuthi yena asheshe asukume,”kusho omunye wezimpukane eliluhlaza.
Kulelisonto uKhoza utshele izintatheli ngesikhathi kunesithangami sabezindaba ukuthi ngoMsombuluko kuyohlukana ikhanda nesixhanti.
“Akulukguni ukuvele uqashe nje umqeqeshi wePirates. Ikilabhu enkulu futhi kuhlala kunengcidezi njalo.
Yingakho nje kufanele njalo siqikelele futhi singaxhamazeli. Kodwa-ke sengingakuqiniseka ukuthi ngaloMsombuluko wakusasa siyobe simthula umqeqeshi wethu omusha,”kusho uKhoza.
Kulempelasonto esiya kuyona imidlalo yeligi yePSL izoqhubeka nalapho ekubhekeke khona abalandeli babambe imimoya noma bahlale bemincile.
Amakilabhu aseKwaZulu-Natal azoba nemidlalo noma azobhekana namaqembu angathanda ukuketula amatafula uma ethathwe kancane.
Abafana Bes’thende, izithandwa zaseLaxi uqobo, iLamontville Golden Arrows izotholana phezulu neFree State Stars ngoMgqibelo ntambama
(3pm) eChatsworth Stadium. Ngokwenzeka kwezinto kwiArrows akukubi kahkhulu kodwa kuyiqiniso ukuthi kufanele baqinise amabhawodi lapha nalapha.
Umqeqeshi weArrows uClinton Larsen uthi usebone kahle ukuthi amabhawodi kufanele aqiniswephi.
NgoMqgibelo odlule iArrows ikwazile ukudla Bloemfontein Celtic ngo 2-1 emdlalweni obusePrincess Magogo Stadium kwaMashu.
“Uma ubheka indlela esidlale ngayo neCeltic bekungekubi kakhulu futhi-ke sikwazile ukubona ukuthi kufanele siqinise laphi,”kusho uLarsen.
Kanti abafana baseMgungundlovu ondonga zibomvu, iTeam of Choice, iMaritzburg United izobe izalelwe yinja endlini nalapho izobe ibhekene neSuperSport United ngoMqgibelo eLucas Moripe Stadium ngo 8.15pm.
Noma leliqembu laPitoli laziwa njengizibabuli ezingathintwa kodwa iUnited itshengise okukhulu ukushintsha selokhu umqeqeshi omusha uRoger De Sa ethathe izintambo. Kuyiqiniso futh ukuthi babenebhadi nje ngesikhathi bedliwa yiKaizer Chiefs ngo 2-1 eHarry Gwala Stadium.